खुलेरै बिपक्षमा उभिए ओलीका २ बिश्वासपात्र, गौतमले र नेवाङ्गले दिए यस्तो चेतावनी ! - Prahar News
खुलेरै बिपक्षमा उभिए ओलीका २ बिश्वासपात्र, गौतमले र नेवाङ्गले दिए यस्तो चेतावनी !
काठमान्डौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिने २ नेताहरुले संसद बिघटनको खुलेरै बिरोध गरेका छन् । तत्कालिन संबिधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका सुवासचन्द्र नेवाङ्ग र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका ओलीका बिश्वास पात्र ओलीको बिपक्षमा उभिएका हुन्।
पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसामू पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम पटक अवसर थियो । उनले अघि भने, म भएको भए राजीनामा दिन्थेँ । मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो ।
यस्तै दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ ।
यही वेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको छ, जसमा उनले यो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अफिसियल ह्यान्डिलबाट ट्विट भएको भेटिएको छ, जसमा नेम्वाङले भनेका छन्,
यो संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता हुन सक्ला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्यो भन्दैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेनौँ । संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ ।
तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’
कतिपय विश्लेषक र कानुनविद्ले अदालतलाई केही शंका भए संविधान निर्मातालाई बोलाएर अन्तर्वस्तुबारे राय लिन सक्ने बताएकै वेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि १ आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ ।
जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन् । आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ ।’
नेम्वाङ ओलीनिकट नेता हुन् । संसद् विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले यसबारे अहिले केही नबोल्ने नेम्वाङको भनाइ छ ।
बिहिवार, पौष २३ २०७७०४:२१:४३